Harr Ngar Kaung – Donation – PVTV Myanmar
ပရီးမီးယားလိဒ်ကလပ်အသင်း ဘရန့်ဖို့ဒ်က ဟားငါးကောင်းအဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အသင်းအင်္ကျီမှာ ကစားသမားတွေလက်မှတ်ထိုးပြီး ပေးပို့
2021-09-18 at 6:33 PM
သာဓုပါ ဟား ၅ ေယာက္
นายพล ธนพล says:
2021-09-18 at 6:40 PM
2021-09-18 at 7:03 PM
Daw Htike Htike Aung says:
2021-09-18 at 7:11 PM
2021-09-18 at 7:22 PM
Sp Ni says:
2021-09-18 at 7:42 PM
Ney Kyal says:
the' aye says:
2021-09-18 at 8:13 PM
Xvht Xsff says:
2021-09-18 at 8:16 PM
Fj Dh says:
Myo Min Hein says:
2021-09-18 at 8:22 PM
2021-09-18 at 8:57 PM
Zxc 134 says:
2021-09-18 at 10:16 PM
2021-09-18 at 10:23 PM
အမှန်ပေါ့ ခုလိုအချိန်မှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ခွေးတွေးဟောင်နေတာကိုနာထောင်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး လေးစားပါတယ်ကိုဟာ5ယောက် အလုံးဘေးကင်ပါစေ အရေတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်
Nan Htoo says:
We respect and honor to your kindness and support.
2021-09-18 at 11:58 PM
2021-09-19 at 12:20 AM
မှန်တာပေါ့၊ခွေးနဲ့ဖက်ကိုက် ရင်ကိုယ် ပါခွေးဖြစ်သွားမှာပေါ့။
2021-09-19 at 4:16 AM
ရှောင်ရှားကြ..တိုက်ခိုက် ရေ ကျွမ်းကျင် အောင်..တိုက်ရင်း လေ့ကျင့်..လေ့ကျင့် ရင်း တိုက်ခိုက် သွားကြ..
ခြုံခို တိုက်..ပစ် ပြေး ပစ်..
PDF = R2P….
2021-09-19 at 7:03 AM
မဂ်လာပါ ဟားငါးကောင်ညီတော်နောင်တော်အပေါင်းဘန္တရာယ်ကင်း ဘေးရန်ရှင်းစွာ အများပြည်သူအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ…..
thae thar says:
2021-09-19 at 11:05 AM
ေလာကမွာ လူ႕အသက္ထက္တန္ဘိုးရွိတာဘာရွိလဲ Rose says:
အမွားကို အမွန္ အမွန္ကို အမွားထင္
ဒါန သီလ ဘာဝနာ မသိ
ဘုရား မသိ တရားမသိ သံဃာမသိ
အလွဴဆိုတာ သီလရွိတဲ႕သူလွဴမွ အျပည့္ဝရတာမသိ
သီလရွိတဲ႕ သူတေယာက္ကိုလွဴတာေလာက္ ကုသိုလ္မျဖစ္တာမသိ
Ma Soung says:
2021-09-19 at 1:54 PM
စိတ္ထား ေကာင္းတယ္ အရမ္းခ်စ္တယ္
2021-09-19 at 5:33 PM
အရွက္မရွိ အေမ အေမနဲ႕
ကိုယ့္ကို ဖင္နာခံ ေမြးထားတဲ႕ မေအ
ဝမ္းေရ စပ္ပီး ေသလို႕ရတယ္
ဖင္နာခံေမြးထားတဲ႕ အေမကို ဘယ္နွစ္ခါအေကာက္းေျပာဖူးလဲ ခ်ီးက်ဴးဖူးလဲ
ဘယ္နွစ္ခါ ေျခဆုတ္လက္နယ္ ႏွိပ္နယ္ေပးဖူးလဲမသိ
N12KY LYNN says:
2021-09-19 at 8:47 PM
Forever respect my happy.
2021-09-20 at 8:27 AM
2021-09-20 at 3:31 PM
2021-09-20 at 6:46 PM
အေကာင္ေတြရုပ္ကိုျကည့္ရင္ အလိုလိုရယ္ခ်င္ေနတယ္ မင္းတို့လို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြ လူရြင္ေတာ္ေတြမရွိေတာ့ ငါတို့ျပည္သူေတြ ျပင္းတယ္ကြာ မင္းတို့ ငါတို့ဆီ အျမန္ျပန္လာခဲ့ေတာ့ ငါတို့လြမ္းေနျပီ
2021-09-21 at 4:48 AM
😍😍😍❤❤❤ Fighting brothers
soe thu lwin says:
2021-09-24 at 6:47 PM